बोलेको भए हुन्थ्यो नि ‘फुङलाम’ - Sagarmatha Online News Portal
Wednesday February 19, 2020 |
पर्यटन / Visit 2020 Nepal
बोलेको भए हुन्थ्यो नि ‘फुङलाम’
किशोर बायुङ राई
२४ चैत्र २०७५, आईतवार
किरात राई चलचित्र संघ(किरासं)को आयोजनामा २०७५ चैत्र २२ गते नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको हलमा सम्पन्न विशेष कार्यक्रममा ६ वटा लघु चलचित्र प्रदर्शन भए । तीमध्ये केशव बाहिङ राई ‘युप्स’को परिकल्पना तथा युवराज (वीर ब.) थुलुङको निर्देशनमा निर्मित ‘फुङलाम’ बायुङ÷बाहिङ राई संस्कृतिमा आधारित चलचित्र पनि प्रर्दशन भयो ।
‘फुङलाम’ बोल्न नसक्ने एक टुहुरी चेलीको कथा हो । उनी जन्मैदेखि बोल्न सक्दिनन् तर मामा (आमा)को हातमा खिपिएको कला र सीप सिक्न माहिर छिन् । फुङलामको मामा उही मिथकमा बाँचेका जाउमा ख्लिउमाले जस्तै गरी मिरिक्क परेको सिप्ते (कलात्मक वस्तुहरुको निर्माण) गर्छिन् । तान बुन्छिन् । झःरझःसी बनाउछिन् । फुर्का बनाउछिन् । चाम्पुरी बनाउछिन् । सालामा बनाउछिन् । किप्सारी बनाउछिन् । मोक्ते बनाउछिन् । दासुवा बनाउछिन् । यी सब ज्ञान र सीप टपक्कै टिप्छिन् ‘फुङलाम’ । सजाउछिन् डायरी रंगैरंगले । र मामाले थमाउछिन् आशिर्वादसँगै फुर्का ।
अप्ठ्यारोमा फुलेको अम्बीरी (सुनाखरी) टिप्दा ज्यानै टिपिन जान्छ मामाको । उही त हो, कहाँपुगेर पातमा पानी ल्याउछिन् । छम्काउछिन् । झकझकाउछिन् । जोखनाकृष्ण देखाउँछिन् । लम्बिदैँन आयु चामलको गेडाले । आत्म कति पोल्दो हो । मन कति रुँदो हो । मुटु कति भक्कानिँदो हो । तर उही बाजेबोजुले कहने । नक्सोले मुध्धुममा भनिरहने मिथककी पात्र बन्छिन् । बिनायोको नाना छपरीजस्तै ।
अब, जाउमा संघर्ष, ख्लिउमा संघर्ष गर्न हट्दिनन् किराती चेली । घामजुन भइसकेको । मामाको लहराजस्तै स्मृतिहरु खिप्छिन् त्यही सिप्तेमा । चलाउछिन् ठ्याठ्यक्सी । सत्कार गर्छिन् पाहुनालाई मामाले जस्तैगरी एक डबका जाँडले । पलेँटी कसीबसेको पाहुनालाई जाँड दिँदै मुस्कुराउदै स्यिवा(ढोग) गर्दा कस्तो मीठो देखिएको ?
उनी तोः (तान) मा लण्ठालाग्दो धागोजस्तै कठिनाइहरुलाई उन्दै उन्दै, सग्ल्याउदै सग्ल्याउदै, गाँस्दै गाँस्दै, बुन्दै बुन्दै मिरिक्क परेको सपना बनाउँछिन् । झःरझःसी सहितको एक तोःलो (थुन्चे) कोसेली बोकेर सेग्रो (बायुङ राईहरुको सबैभन्दा ठुलो पितृकार्जे)मा निम्तालु भएर जाँदा न्यानो टाँसिदेल्लेकसँगै मीत बाबैले फुङलामको बाटो देखाइदिन्छन् । समाजमा व्याप्त संकुचनलाई औल्याइदिन्छन् । कस्तो सङ्लो विचार मीत बाबैको ?
हुन पनि हो । जित्छिन् नि त फुङलामले । फुक्छ सोलु एफ्.एम्. ले, “त्यसैगरी प्रथम स्थान भने सोलुखुम्बु जिल्ला नेचाबतासे ५, लिस्पुम्की सुश्री ‘फुङलाम बाहिङ राई’ ले जित्नुभएको छ ।” अनि सम्झिन्छिन् घामजुन भएकी मामालाई । सुमसुम्याउछिन् उही मामाको चिनो ‘फुर्का’ । कत्ति बोल्न मन लाग्दो हो । कत्ति बह पोखाउन मन पर्दो हो । मनमा बहिरहन्छिन् तमासले । आँखामा बगिरहन्छिन् बेतोडले । लाग्छ ‘बोलोको भए हुन्थ्यो नि फुङलाम ।’
Published On: २४ चैत्र २०७५, आईतवार 796पटक हेरिएको
विजुलीको तारमा भ्रमको संचार !
विकासमा राजनीति र राजनीतिमा अपराधिकरणको पराकाष्ट
पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा वीरगति प्राप्त सैनिकहरुको सम्झनामा मनाइने ‘पप्पी डे’
‘तिङला घटना राजनीति र भ्रष्ट्राचार गर्ने गिरोहको सुनियोजित योजना हो’ : पिडित कार्की
‘राष्ट्रको नाम विश्वमा पुर्याउने माध्यम खेलकुदनै हो’ : सांसद राई
‘खेलकुद र पर्यटन सँगसँगै अगाडी लैजानुपर्छ’ : अध्यक्ष राई
प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालमा, मुटुको एन्जियोग्राफी गरियो !
राप्रपाको दुरी घट्दैन राजा र राजसंस्थासँग: कमल थापा